News - PVC အပြင်ဘက်နံရံဆွဲထားဘုတ် PVC ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
PVC အပြင်ဘက်နံရံဆွဲထားဘုတ်အဖွဲ့ PVC ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
ပြင်ပနံရံဆွဲထားဘုတ်များသည်အဓိကအားဖြင့်မိုးလုံလေလုံနှင့်အပြင်ပိုင်းနံရံများ၊ ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် PVC စာရွက်များဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း GB / T88 ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် PVC စာရွက်များဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများသည် GB / T8814-1998, QB / T2133-1995, Q / DAB.001-2003 ကိုရည်ညွှန်းသည်။
၁ ။ ဆွဲထားသောပျဉ်ပြား၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိသစ်သားကိုတုပခြင်းကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကြောင့်အရောင်များသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးလိုင်းများမှာကြည်လင်။ တောက်ပသည်။ ၎င်းသည်ခေတ်ပေါ်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စတိုင်လ်၏ခေတ်သစ်သဘောတရားဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဗီလာများ၊ တိုက်ခန်းများနှင့်အဆောက်အ ဦး ဟောင်းများအတွက်သင့်တော်သည်။
2. ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သောအသုံးအဆောင်ဒီထုတ်ကုန်သည်ပြင်းထန်သောအအေးနှင့်အပူကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အက်ဆစ်၊ အယ်လကာလီ၊ ဆားနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အစိတ်အပိုင်းများ၏ချေးခြင်းသည်အထူးကောင်းမွန်သည်။ ဆေးကြောရန်လွယ်ကူသည် (ရေမှုန်ရေမွှားဖြင့်ဆေးနိုင်သည်) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းစင်သည်
၃။ ကောင်းမွန်သောမီးစွမ်းဆောင်ရည်။ ဤထုတ်ကုန်တွင်အောက်စီဂျင်ညွှန်းကိန်း ၄၀ ရှိပြီးမီးလျှံတားပြီးမီးမှမိမိကိုယ်ကိုငြိမ်းသတ်ပြီး B1 (GB-T8627-99) ၏မီးသတ်စနစ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
4. မြင့်မားသောစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း။ အပြင်နံရံအပူထိန်းသိမ်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ပိုကောင်းစေရန်အတွက် polystyrene မြှုပ်ပစ္စည်းကိုကာစရာကုလားကာ၏အတွင်းပိုင်းအလွှာတွင်တပ်ဆင်ရန်အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။ Polystyrene မြှုပ်ပစ္စည်းသည်အိမ်ပေါ်တွင်“ ချည်” အလွှာကိုတင်ထားပုံရသည်။ ပြင်ပနံရံဆွဲထားဘုတ်သည်“ အင်္ကျီ” ဖြစ်သော်လည်းဆောင်းရာသီတွင်အိမ်သည်နွေးသည်။
၅။ အဆင်ပြေစွာတပ်ဆင်ခြင်း၊ စျေးနှုန်းနိမ့်ခြင်း၊ အဆင့်မြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ တစ်ရက်တွင်စတုရန်းမီတာ ၂၀၀ ရှိသော villa တစ်ခုကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ပြင်ပနံရံဆွဲထားသည့်ဘုတ်အဖွဲ့သည်ယခုအချိန်ထိအသက်သာဆုံးနှင့်အချိန်ကုန်ဆုံးသောအပြင်ဘက်နံရံအလှဆင်ခြင်းစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပျက်စီးမှုဖြစ်လျှင်, ရိုးရှင်းမြန်ဆန်ပြီးထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသောသစ်ကိုဆွဲထားပန်းကန်အစားထိုးဖို့သာလိုအပ်သည်။
၆။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းသက်တမ်းသက်တမ်းမှာအနည်းဆုံး ၂၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် GE (General Electric) ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူအလွှာပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန် ASA သည်သက်တမ်း ၃၀ ကျော်သက်တမ်းရှိသည်။
၇ ။ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် (သို့) အင်ဂျင်နီယာလက်တွေ့တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုမဖြစ်စေပါ။ ၎င်းသည်ပြန်လည်အသုံးပြုမည့်အစားပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
၈။ ကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးမြင့်မားသောအပြင်နံရံချိတ်ဆွဲထားသည့်ပျဉ်ပြားတပ်ဆင်ခြင်းသည်ဆောက်လုပ်ရေးကာလကိုများစွာတိုစေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အဆောက်အအုံဟောင်း၏မျက်နှာစာပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းစီမံကိန်းတွင်မူရင်းမျက်နှာဖုံးကိုဖျက်သိမ်းခြင်း၊ မူရင်းနံရံကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ အမှိုက်သရိုက်ဖယ်ရှားခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးတိုးတက်မှုအရှိန်မြှင့်ခြင်းတို့မပါဘဲတိုက်ရိုက်ဆောက်လုပ်နိုင်သည်။ ။ အမှိုက်သရိုက်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကာလကိုအစားထိုးခြင်းကြောင့်စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သည်။
post အချိန်: ဇန်နဝါရီ -12-2021